Safar ingenye yezinyanga ezibalulekile kakhulu ekhalendeni le-Islam. Lenyanga ye-Safar iyinyanga yesibili ekhalendeni lamaMuslim, uma ulichaza leligama ngesichazamazwi lisho “Okungenalutho”.
Ngesikhathi sasemandulo ezweni lamaArabhu kulenyanga, imizi yayivame ukukhala ibhungane ishiywe ingenabani futhi ingahlalimuntu, ngoba isivumelwano sokunqatshelwa kokulwa ngenyanga ka-Muharram sabe sesiphelile njengoba sekuqala lenyanga ka-Safar okuyinyanga yesibili, bonke abantu babe sebephikelele empini njengoba kwabe kungavumelekile ukulwa ngenyanga kaMuharram.
Safar, uma ulihlaziya leligama lichaza umbala ophuzi. Uma sekuchazwa kabanzi kuthiwa ngesikhathi amagama ezinyanga eqanjwa leli elithi 'Safar' laqanjwa ngoba kwakusenkwindla lapho ihlobo seliphela sekuzongena ubusika, namaqabunga ezihlahla esephuzi ngokombala.
Amanye amaMuslim anezinkolelo eziyize ngalenyanga njengokuthi bathi lenyanga inamabhadi kanye namashwa. Kepha izimfundiso zika-Allah kanye noMphrofethi (u.k.k) zisichazela kabanzi ngokuchitha zishaye zihlikize lezizinkolelo zababantu eziyize.
Uthi u-Allah kwi-Qur'aan yakhe eNgcwele, “Ayikho into ekwehlelayo ngaphandle kwentando ka-Allah..............” Surah 64 verse11